IINGCAMANGO EZINGAMA-75 ZOKUHAMBA KUNYE NOYILO (IBRICK, IPAVER KUNYE NEFLAGSTONE) - IINDAWO ZOKUPHILA NGAPHANDLE
Eyona iindawo Zokuphila Ngaphandle Iingcamango ezingama-75 zokuhamba kunye noyilo (iBrick, iPaver kunye neFlagstone)
Indawo yokuhamba lulongezo olukhulu kwigadi yakho eqinisekileyo yokuphucula ukubonwa komhlaba ongaphandle kunye nokuvumela ukonwaba ngakumbi eyadini yakho. Apha ngezantsi uyakufumana imifanekiso yeendlela ezingama-75 zokuhamba kunye noyilo lokuphefumlelwa. Iindlela ezahlukeneyo zendlela ziboniswa ngezitena, iipavile kunye namatye eeflegi ukwenza eyona ndawo ingcwele yegadi.
Kumfanekiso ongentla kwendalo yelitye lelitye lelona khetho lilungileyo kule gadi intle yaseJapan. Xa usenza indlela yokuhamba ingaphezu kwendlela esuka apha ukuya apho - yenza indlela emnandi kunye nokumema ukuba uyilandele.
Iingcamango zeBrick Walkway
Iingcamango zokuhamba ngamatye
Iingcamango zokuhamba ngePaver
Iingcamango zokuhamba zeKhonkrithi
Iingcamango ze-Walkway ezingama-67 kunye noyilo loMfanekiso weSilayidi weVidiyo
Indlela yokuhamba okanye inyathela ngamatye kwiyadi yakho yangasemva inokukunceda ungonwabele indawo yakho yangaphandle. Ukwenza eyakho indlela yoyilo ye-DIY kunokufezekiswa ngaphandle kwemali eninzi kunye neprojekthi yeveki. Nazi ezinye zeentlobo zezinto ezidumileyo ezisetyenziselwa ukukunceda ukuba uze neengcamango zokuhamba ngeyadi yakho.
Isitena -Izitena zilungile kwiindawo zokuhamba zangaphandle kuba inikezela ngenkangeleko eyahlukileyo enomtsalane kwaye intle. Nangona kunjalo, izitena zilungile xa zisetyenziswa kwimozulu enobulali kwaye kuya kufuneka zitywinwe rhoqo emva kweminyaka embalwa ukunceda ukuthintela nakuphi na ukungena kwamanzi.
Pavers - Iipavile zihlala zisetyenziselwa iindlela zokuhamba kunye neendlela kwaye zinokuza kwizinto ezahlukeneyo. Ikhonkrithi, ithayile yodongwe, izitena kunye nelitye zihlala zisetyenziswa njengeepheyinti ezenza ukuba zomelele kwaye ziphantsi.
Amatye okunyathela -Amatye aqingqiweyo aqhelekileyo anokufakwa ezantsi kwigadi yakho okanye ingca ukwenza umendo naphi na apho ufuna khona. Olu khetho lukhethiweyo kwiprojekthi yokuhamba ngokukhawuleza njengoko zombini zingabizi kwaye kulula ukuzenza.
Ikhonkrithi Iikhonkrithi zekhonkrithi, iipavile kunye neebhloko zekhonkrithi ezinamatampu zihlala zisetyenziselwa ukwakha iindlela zokuhamba ezomeleleyo. Ikhonkrithi lukhetho oluthandayo kuba banokuma kwiimeko zemozulu ezigwenxa kwaye balungelelaniswe ukuze bajonge inkangeleko oyifunayo. Ngeendlela zokubala imibala, ukubumba kunye nokunyathela ungafumana inkangeleko yesiko eyahlukileyo eyadini yakho.
Yintoni eyenza le ndlela yokuhamba iyingqayizivele kukuba iyanciphisa umda wangaphandle weeflegi ezazisetyenziselwa ukwenza umda othe ngqo, ngelixa igcina eminye imiphetho yelitye lendalo lendalo.
Iiflegi ezinkulu zendalo ezisetyenzisiweyo kule ndlela yokuhamba ekhokelela kumnyango wangaphambili lukhetho olufanelekileyo lwezinto ezibonakalayo ukwenza olo jongeko lwendalo kunye nolothando kule gadi intyatyambo incinci.
Le ndlela yokuhamba yenziwa kusetyenziswa iibhloko zekhonkrithi ezinamatye, ehambelana nendlela yokuhamba yekhonkrithi egalelwe amatye.
Ezi ndlela zokuhamba ngokwazo zinamatye aqingqiweyo kwaye zisebenzisa ubukhulu beepavumenti ngaphakathi kolawulo. Le ndlela yokuhamba iqhagamshela indawo yokuhlala encinci esezantsi inyukela kwi-gazebo evulekileyo.
Indawo entle yegadi ezaliswe ngamanzi asemva kwendlu kunye nelitye elijikayo kunye nomgaqo wegrabile okhokelela kwindawo yokuhlala ngaphandle.
Indawo yothando egutyungelwe yiWisteria esebenzisa ipateni yokuluka indlela yokuhamba ngamatye.
Le ndlwana intle inqabileyo yenziwe yantle nangakumbi yindlela yentsimbi ejijekileyo egadini. Iithango ezincinci kunye nendawo yengca egobile imema iindwendwe ekungeneni kwekhaya.
Indlela ehamba banzi egadini yecactus esebenzisa iipavumente zamatye ukutshatisa konke-ukuziva kwegadi eyomileyo.
Ukukhokelela kwipatio egutyungelweyo kunye neethayile zamatye endalo, ilitye leflegi elisetyenzisiweyo yayililitye lendalo, ligcina ubume bayo bokwenyani.
Sebenzisa ikhonkrikhi yocalo ukwahlula izityalo kwi-terracotta evulekileyo yokuhamba, igadi ibonakala iphakanyiswe kancinci ngaphezulu kwenqanaba lokuhamba, ibenza babonakale bezimele, njengezinto zobugcisa.
Izitena ze-Antiqued zikhokelela kule ndawo incinci yokuhlala kwindawo eqongeni ephakanyisiweyo eneebhloko zekhonkrithi.
Kuthatha ixesha elingakanani ukutshintsha ngokusemthethweni igama lakho
Izitena zendlela yezitena zezinye zezona zinto zixhaphakileyo zokuhamba, kwaye kulo mzekelo, izitena zokubekwa kwezitena zabekwa kwipateni ye-chevron zaza zabiyelwa ngemigca yezitena ethe ngqo ukugxininisa.
Isitiya esenziwe kakuhle esisebenzisa izitena njengezona zinto ziphambili zendlela. Izinto ezifanayo zazisetyenziswa kumanqanaba amxinwa ngokunjalo, ukudala ukujongwa kwe-rustic yegadi.
Esi sitiya sihle sisebenzisa uyilo oluhle ngokuhamba kwindlela yaso kusetyenziswa izitena kwikhonkrithi ethululiweyo. Isebenzisa indibaniselwano yefomathi ye-chevron kunye nezakhelo ezithe tyaba.
Le ndlela yokuhamba idibanisa ipatio kunye nendawo yokuhlala evulekileyo. Indawo yokuhamba yenziwa ngesitalato esimile okwekhonkrithi iibhloko zepavumente ezijikeleze ubeko lwe-cobble rosette yendawo yokuhlala enomngxunya ojikeleze umlilo.
Ukuya kwinkangeleko yanamhlanje, le ndlela yokuhamba inemigca ecocekileyo, ethe tye kunye nomphezulu ocacileyo. Yindibaniselwano yeebhloko ezomileyo zekhonkrithi ezimile okwexande zibekwe ebhedini yelitye lomlambo.
Le ndlela yokuhamba isebenzisa umbala omnyama kwizitena zayo kwaye isebenzisa ikhonkrithi ukuvala izikhewu zayo.
Ukujonga inkangeleko yendalo ngakumbi, la manyathelo okuhamba asebenzisa amatye ethe tyaba endalo ajongeka mhle ngeendonga zamatye omlambo ezisetyenziselwa ukubamba izityalo emacaleni.
I-Slate Flagstones yayizinto ezikhethiweyo kule gadi ilula. Igcina imilo yayo irhabaxa kwaye iyibeka ngekhonkrithi ukuyikhusela ekuhambeni okanye ekuzinzeni emhlabeni.
Le ndlela imxinwa intle ijikelezwe zizinto zendalo ezenziwe ngabantu kwaye ineentsika zamatye ecaleni kwendlela ene trellis apho izidiliya zisebenza njengomthunzi. Amatye eeflegi asetyenzisiweyo kwindlela yokuhamba yintsika enombala okhazimlayo esetwe kwisiseko sekhonkrithi kunye negridi emhlophe.
Uyilo olwahlukileyo lokuhamba olusebenzisa ilitye leflethi kwilitye lentlabathi elibekwe ngaphezulu kwamatye e-beige anemibala ethe tyaba. Ukuhlelwa kwamatye kunceda ukugcina igrabile ekuphumeni uye kwindawo yengca.
Ibekwe ngqo engceni, la macwecwe makhulu abomvu eColorado abomvu eCameron ilitye leflethi ngokuqinisekileyo longeza ubuntu obuninzi egadini encinci engasemva. amatye abonelela ngoyilo olubonakalayo kuyilo lwembonakalo kwaye akuvumela ukuba ubuchule bakho bubaleke.
Lo mmandla mkhulu wepaki / wegadi ubonakaliswe njengolungelelwaniso lwayo lwasendle nolubonakala ngathi aluhlelanga. Indawo yokuhamba embindini womhlaba obomvu ngamatye eelitye lekalika, aphantse amhlophe ngombala, eyenza ukuba iphume ngokuchasene nombala womhlaba.
Amacwecwe amakhulu amatye eflegi egrey afakwe kwiyadi egutyungelwe ingca, edala indlela encinci edibanisa umnyango ongasemva ukuya echibini.
Amatyholo ayintabalala kunye nezityalo eziqhakaza iintyatyambo zijikeleze le ndlela yokuhamba izitepsi esebenzisa amatye amakhulu amatye ukwenza amanyathelo emhlabeni, okwenza ukuba ibonakale iyinxalenye yegadi.
Le ndlela imxinwa yenza ipateni enomdla ngokusebenzisa iithayile ezixande ezibekwe kwenye indlela. Isiphumo yindlela yokuhamba yomqolo ebekwe ngaphezulu kwengca kunye nezibane zomhlaba zasegadini.
Ikhaya lasekhaya laseMeditera lisebenzisa iindlela zokuhamba ngamatye akukhokelayo ukusuka kwindlela eya emnyango omkhulu. Embindini wendlela yokuhamba, indlela ethe tye yaphulwe yirosette yamatye kunye nezityalo embindini wawo, zenza isiqwenga somlomo.
Le ndlela yokuhamba imfutshane ilula ibeke iithayile zesamente ngaphezulu kwamatye omlambo amhlophe, yenza indlela yokuhamba elula neyala maxesha.
Usebenzisa iipeyinti zesamente, le ndlela yokuhamba ikusa kwindlela egobileyo eya kwigadi entle.
Ukungena kule ndawo iphakanyisiweyo yomlilo kwenziwa umdla ngakumbi, njengoko isebenzisa iibhloko zesamente ezijikelezayo ukwenza indlela yokuhamba ngaphezulu kwegrabile enemibala ye-beige.
Ngokwesiqhelo, iindledlana zeflegi zisebenzisa amatye amakhulu amatye, kodwa le ndlela yokuhamba ngepatio isebenzisa amatye amancinci abomvu umbala ukukunceda ukukhokelela kwipatio nasemva.
Uninzi lwemizekelo yokuhamba kwesi sithuba isebenzisa amatye acaba-tyaba njengeendlela zokuhamba, kodwa lo mzekelo awenzi njalo. Endaweni yoko, isebenzisa nje amatye egrabile ebomvu endlela ekhokelela ngaselunxwemeni lomlambo, ukuyenza ibonakale ilungele indawo. UWood trellis ’uhombise omabini amacala endlela ekhokelela echibini kwaye abonelele ngomthunzi ofunekayo.
Igadi eyomileyo igcina isikimu sayo semibala ye-beige / yesanti, ngokusebenzisa iipavile ezindala ezilungiselelwe kwipateni yebhondi ebalekayo.
Ngokungafaniyo nemizekelo yangaphambili, le ndlela yokuhamba isebenzisa ikhonkrithi enestampu kwi-cream beige endaweni yamatye endalo. Inemigca ethe tye kunye nepateni enkulu yokuluka ibhaskiti.
Le gadi yanamhlanje iMeditera isebenzisa iibhloko ezixande zamatye aseTuscan okwenza le ndlela yanamhlanje ikukhokelela kwiindawo ezahlukeneyo ngasemva kwendlu.
Amatye abomvu abomvu kwipateni yokuluka ibhaskiti asetyenziswa kule gadi yohlobo lwaseFrance.
Le hammock inokhetho olukhethekileyo lwezixhobo zokuhamba. Endaweni yamatye okanye iipavile, zisebenzisa ukumodareka kwe-PVC yemithi ehlelwe kwipateni yokuluka ibhaskiti.
Ukuya kwiskimu sombala ongathathi hlangothi ngakumbi ukuze utshatise uyilo lwendlu, iipavumente ezisetyenziswe kule ndawo yegaraji / indlela yokuhamba ziibhloko zekhonkrithi kubungakanani kunye nokumila kwezitena.
Le ndlela yokuhamba ibonisa indibaniselwano yezitena zokubhabha izitena kunye namatye endalo, edibanisa umngxuma womlilo kwindawo eneethayile emva kwendlu.
Izitena zeterracotta zidibanisa indawo encinci yepatio kwindlela yokuhamba yekhonkrithi / igaraji, ukuyenza ime ngaphandle kwaye iyigxininise kwindlela yokuhamba yesiqhelo.
Ukukunceda ujikeleze lo myezo ugcinwe kakuhle zizitena, ezisebenzisa ipeyinti yokuluka ibhaskiti. Isakhiwo esincinci esenziwe ngomthi esineebhentshi yindawo entle yokuphumla nokonwabela indawo engqongileyo.
Le ndawo yepatio yangaphandle inxibelelene namanye amacandelo endlu ngokusebenzisa iipali ezinamacala amathandathu. Inkuni egqunywe ngaphandle kwindawo yekhitshi yenza indawo efanelekileyo yangasemva ukuba ixhonywe nabahlobo kunye nosapho.
uthini umshumayeli emtshatweni
Into eyahlukileyo ngale ndlela yokuhambahamba kukuba isebenzisa izitena ezimdaka ngombala omenyezelayo endaweni yamatye endalo athandwa kakhulu okanye ubuncinci bematte.
Ukutshatisa uyilo lwala maxesha lwendlu, indlela encinci ehamba ngasemva idibanisa amatye omlambo kunye neebhloko zamatye ezimhlophe ezibekwe ngokuthe tye.
Kubonwa kwi-engile eyahlukileyo le ndlela yindlela ephantsi yokwenza indlela ejongeke kakhulu yokujonga indawo yegadi.
Ilitye lelitye lelitye longeza umnxeba omnandi kule gadi incinci, ibonelela ngendledlana encinci ejikeleze umyezo ecaleni kwendlu.
Le ndlela yokuhamba ihamba ngeentyatyambo ezincinci, izihlahla kunye nomthetho wegadi, kunye namatye eelitye elicwangciswe ngokungacwangciswanga.
Le ndlela incinci ikhokelela kwisango legadi isebenzisa indibaniselwano yemibala eyahlukeneyo yemibala ye-quartz, eyenza ukubonakala kwendalo kufanelekile ngaphandle.
Esi sitiya sisebenzisa indibaniselwano yeterrazzo yokuhamba kunye namatye amakhulu nasindayo amatye asetyenziswa njengezinyathelo / iirisers.
Le gadi intle yaseJapan isemva kwegadi yelitye ibonelela ngendawo ezolileyo yokuhamba ngamatye kumhlaba wayo wegrabile.
Iimpahla ze-cocktail zokufumana umtshato
Le ndlela yokuhamba ikhokelela kwindawo enezitepsi ezenziwe kwinto enye njengendlela yokuhamba. Isebenzisa ilitye lentlabathi elisikiweyo ngobukhulu obahlukeneyo kwaye ilandelwa kunye ukwenza indawo ezinzileyo, egudileyo.
Umbala obomvu oqaqambileyo wale ndlela yokuhamba kwelitye ngokuqinisekileyo uyaphuma kwisiseko somhlaba esimnyama ebekwe kuso.
Lo mzekelo usebenzisa indibaniselwano yezinto zokuhamba. Kwinqanaba lezinyuko eziqingqwe ngaphandle kwenduli ezisebenzisa amanyathelo elitye elicociweyo, zizithambisi zesitena kwipateni elula yokubopha kwaye yenziwe ngezinto zokwakha ezifanayo. Ibala lokudlala lomntwana onesanti eligcwele isilayidi kunye nenqaba ngasemva.
Le ndlela yokuhamba ijikajike isebenzisa amatye eflegi anemibala kwaye iyilungisa ngokudibeneyo njengeetayile zangaphakathi, yenza indawo yokuhamba engatshintshiyo nezinzileyo.
Amatye abomvu abomvu ayadibana kule gadi ilula ejikelezwe ngamatye abomvu agqunywe ngumhlaba kunye namatyholo aluhlaza.
Le ndlela yokuhamba ibonakala ngathi ihluma ngomlingo emhlabeni njengoko ijikelezwe zityholo ezisempilweni. Isebenzisa amatye esileyiti abekwe emhlabeni.
Le ndlela yokuhamba ibonelela ngamanyathelo okujonga kwendalo akukhokelela kwindawo ephezulu yegadi. Usebenzisa isileyiti enkulu yelitye leflegi, indlela yokuhamba ikhangeleka ngathi yinxalenye yomhlaba.
Le ndlela enkulu yelitye eliluhlaza yelitye lendlela yeyona ndlela ikhethekileyo kule ndawo ingasemva kwendalo. I-mulch yemithi yendalo inceda ukuphinda ujonge inkangeleko yokwenyani yomgangatho wehlathi.
Indawo egoso / ejijekileyo usebenzisa iipeyinti zezitena ezinobungqingqwa bokubambelela okungcono kunye nokubamba ukumelana.
Uyilo lwepavayla yokuhamba ecaleni kweli khaya lesitayile laseSpain yindlela ephantsi yokwenza indlela yokwamkela ehlala kumlinganiswa kunye nezinye izinto zokwenziwa kwekhaya.
Indlela eyahlukileyo yokusebenzisa iicobblestone pavers, bacwangcisa iziqwenga ezi-6 zamatye eepobble ukwenza ibhloko yoxande kwaye bababeka ngokulinganayo omnye komnye ukwenza indlela yokuhamba.
Izitena ezibomvu zamatye abomvu zazimiswe ngokuqinileyo kwaye zilungiswe kunye ukwenza lendlela incinci ikhokelela kwiseti encinci yezinyuko eziboshwe ngesileyiti.
Ilitye eliyingwe eliyingxande lamatye abekwa ngendlela elula yokubaleka, ajikelezisa indlela eya esangweni.
Ezi zixhobo zokukhanya zibomvu zibomvu zinika umahluko omkhulu ngokuchasene nengca eluhlaza eqaqambileyo, kwaye zenza ipateni entle egobile ngendlela yayo.
Ukuzinza ngesiseko sekhonkrithi kunye nokugrabha, le ndlela ilula ikukhokelela esangweni kunye neebhaskithi zokuluka izitena.
Endaweni yokubeka nje iithayile zelitye eliluhlaza engceni okanye emhlabeni, le ndlela yokuhamba iyilungisa ngokusisigxina ngokudibanisa iithayile kunye nokuyi grout, ukuyenza ukuba ingathambekele ekufudukeni.
Indlela emxinwa ekhokelela kule gazebo ivalwe ngokupheleleyo. Ukugcina ukhuselekile eludakeni ngexesha leemvula, idibanisa iithayile zesileyiti ezixande kunye namatye amancinci oxande wendalo asikiweyo aphakathi.
Amacwecwe erangqa amatye esileyiti asetyenzisiweyo njengendlela yokuhamba kule ndlela ijikelezwe sisihlahla, nokuba ingcoliswe ziintyatyambo ezincinci phakathi. Isango lesinyithi eliqhelekileyo elikhokelela kwindawo enamahlathi eneentsika zamatye livusa imvakalelo yemfihlakalo kunye nomdlalo weqonga.
Le ndlela yokuhamba iyazigxininisa isuka kwigadi iphela njengoko isebenzisa indibaniselwano yamatye amdaka angwevu kunye neziqwenga zendalo zamatye e-slate ukwenza indlela yokuhamba.
Le ndlela yokuhamba isileyiti ikhokelela kwi-hammock eqhotyoshelwe emithini. Indawo engqongileyo yendalo, enemithi emikhulu enika umthunzi kuloo ndawo. Indlela yokuhamba isebenzisa isileyiti esibekwe kwikhonkrithi kwaye siyasika ngqo emaphethelweni, siyenza ime ngaphandle.
umtshato enkosi amakhadi umyalezo
Ulungelelwaniso lwala maxesha yingcinga yale gadi encinci yoqalo. Kubekwe ngaphezulu kwengca kukho iithayile zesileyiti ezingama-60 × 60, ezenza imiqolo yolingano kunye neentsika zethayile, zikunika indlela entle yokuhamba naphi na apho ufuna ukuya egadini.
Esi sitiya sibonakala ngenkangeleko yaso ehleliweyo, sisebenzisa iibhloko zekhonkrithi zesikwere sendlela, ebonakala ngathi ichithakele ecaleni kwendlela emxinwa.
Igadi yale mihla isebenzisa iithayile ezinkulu zekhonkrithi ezinobungakanani obahlukeneyo boxande kunye nezikwere, ukwenza ipateni enomdla yejometri ngaphezulu kwesiseko segrabile.
Indlela yanamhlanje esebenzisa amacwecwe amakhulu eekhonkrithi ezihlelwe kwipateni ye-90 degree ye-chevron kwaye inendlela ejikelezayo, echetyiweyo kwimiphetho engaphandle.
Igadi yaseFrance inendlela yesimanje yokuhambahamba kusetyenziswa iibhloko zelitye lentlabathi elihamba kwindlela yoxande ejikeleze igadi. Indawo ekugxilwe kuyo njengalo mthombo ujikelezwe ziithango eziluhlaza inokuba yindlela elungileyo yokuza nemibono yokuhamba kunye noyilo oluya kukunceda ufumane uninzi lwegadi yakho.
Iingcamango ezingama-65 zePatio Design - Iingcamango ezingama-50 zeDisk Design - Iingcamango zangaphandle zomlilo - Uyilo lweGazebo ezingama-35 - Uyilo lweMpawu zaManzi eGadi
hamba kule ngoma yepati
Utshintsha njani igama lokugqibela kwi-texas
Ukunxiba maxi ukunxiba umtshato
Izipho zokukhumbula umtshato kuye zeminyaka emi-4